Ukuphupha izinyo elaphukileyo ▷ ➡ Discover online ▷ ➡️
Amazinyo ethu ebesoloko lelinye lawona malungu abaluleke kakhulu emzimbeni womntu. Xa sibancinci, sisebenzisa ukuzikhusela kubantu esidlala nabo kunye nokwenza imida yethu icace kubo ngokuluma isandla okanye ingalo ngaphandle kwamazwi.
Kodwa nangona namhlanje thina bantu badala sinezinye iindlela zokuzikhusela, eli binzana lisaziwa "Bonisa umntu amazinyo akho", Oko kuthetha ukuba ubonakalisa omnye umntu ngemiqondiso ecace gca ukuba ukulungele ukunika uxhathiso olomeleleyo. Ke uyayicacisa: lumka! Nanku umda wam, lumka!
Ewe kunjalo, sidinga amazinyo ethu rhoqo kwaye ngokungxamisekileyo ukukhawulezisa ukutya kwethu kunokoyikisa abo basichasayo. Ngaphandle kwamazinyo, ukutya kwethu akunakuphela kuphela. Amazinyo ethu abalulekile njengophawu lwesimo namhlanje. Into yokufakelwa entle nengafaniyo iyafana nempilo, ubutyebi kwaye inefuthe elikhulu ekubonakaleni kobuhle babantu abaninzi. Esi sisimo sengqondo esingakhathaliyo, kodwa kwangaxeshanye kunzima ukuphuma entlokweni yabantu.
Ngoku luthini uphando lwamaphupha ukuba izinyo liphuka ephupheni? Luluphi utoliko olukhoyo malunga noku? Ngaba intsingiselo iya isiba nzulu ngakumbi ukuba izinyo elaphukileyo ebuthongweni kamva liyasilela? Ungathini xa uphulukana namazinyo akho aqhekekileyo kwi el mundo Amaphupha?
Ukuze utolike iphupha lakho lezinyo elaphukileyo ngendlela eyonelisayo, sinokukuqokelela amaphupha anomdla kwaye aqhelekileyo malunga neesimboli. Apha ngezantsi uyakufumana ukutolikwa kwephupha ngokubanzi, ngokwengqondo nangokwasemoyeni.
1 Uphawu lwephupha «izinyo elaphukileyo» - amaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Izinyo elaphukileyo, kutheni ndiphupha ngayo?
1.2 Amazinyo aphukileyo ayawa ephupheni.
1.3 Ukuphupha izinyo langaphambili elaphukileyo: yeha!
1.4 Ukuqhekeka kwamazinyo okuqhekeka: umsantsa ekuphupheni kwamazinyo?
2 Uphawu lwephupha «izinyo elaphukileyo» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «izinyo elaphukileyo» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «izinyo elaphukileyo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «izinyo elaphukileyo» - amaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Izinyo elaphukileyo, kutheni ndiphupha ngayo?
Ukuba iqhekeza lezinyo laphukile emaphupheni akho, unokulindela ubunzima obuncinci kwilizwe lokwenyani, elinokuthi, kodwa, linokoyiswa ngokulula. Ukongeza, kusenokwenzeka ukuba ukuphupha ukufezekisa iinjongo zakho kufuna ukuba uzame kancinci kunesiqhelo, nangona kunjalo iluncedo kuphuhliso lobuntu bakho.
Amazinyo aphukileyo ayawa ephupheni.
Ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, ukuwa kwamazinyo ngamanye amaxesha kukwabonisa ilahleko kwihlabathi elivukayo. Ukuba ngoku ngamazinyo aqhekekileyo awayo ephupheni, ngokuqinisekileyo inokuchazwa njengomfanekiso ophuphayo, kuba ngasemva koku, phakathi kwezinye izinto, ukoyisa ukungazithembi kufihliwe.
Ukuphupha izinyo langaphambili elaphukileyo: yeha!
Izinyo langaphambili elaphukileyo luphawu lwephupha oluhlala luhambelana nesini saloo mntu kuthethwa ngaye. Ukuba izinyo langaphambili liphukile ephupheni, oku kufanekisela ukuvuleka komphuphi kwinkanuko yakhe, kunye neemfuno zakhe zesondo. Ukongeza, umntu ophuphayo unokuhlangabezana kakuhle nezithintelo ezinokubakho malunga nokusebenza ngokwesondo.
Ukuqhekeka kwamazinyo okuqhekeka: umsantsa ekuphupheni kwamazinyo?
Ukuba iyeza lokufakelwa lisuka kugonyo, oku kungazisa ngelahleko ezohlukeneyo, onokuthi ungene endaweni yazo, ukuba uqinisekile ngesizathu sazo. Kwakhona, iphupha elinje lilumkisa ngento engento kakhulu kunye nesidingo esikhulu sokwamkelwa. Zombini zinokubangela iingxaki.
Uphawu lwephupha «izinyo elaphukileyo» - ukutolikwa ngokubanzi
Amazinyo ngokubanzi lolunye lweempawu zamaphupha eziqhelekileyo. Ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, abonisa amandla okwenza kunye nokuzimisela.
Ukuba umntu uphupha ngoku elinye okanye amaninzi aphukile, kuyaqondakala, okokuqala, kuphazamisa ukulala. Apha kuya kufuneka ukhumbule imeko ngokubanzi yephupha, kuba ukutolikwa ngokuchanekileyo komqondiso wephupha wezinyo elaphukileyo kunokufunyanwa koku. Ngamanye amaxesha abantu bavela nasemaphupheni, njengogqirha wamazinyo.
Umzekelo, ukuba uzibona umi phambi kwabantu kuba ufuna ukuthetha into kubo, kodwa ungakwazi ukubiza igama kuba ngequbuliso awunazinyo lisempilweni, unokulifumana apha. ukungaqiniseki Fihla amaphupha kwiimfuno zokwenyani zobomi.
Unokuzifumana ukwimeko ebomini ongaziva ukuba ungayifumana. Inokuba luvavanyo, intetho, okanye iprojekthi yobungcali. Izinyo elaphukileyo likugcina ukude kule projekthi kwaye ke ngoko kuyenza icace into yokuba yinto ebalulekileyo, ukuba ilungile kumphuphi. ukungonwabi lungise
Izinyo elaphukileyo linokuba sisiphumo sokulunywa ngamandla. Uphando lwamaphupha luyaqonda koku ukubhekiswa okunokwenzeka kwi ibhongo likhulu kakhulu yokuphupha. Mhlawumbi lo mntu kuthethwa ngaye usombulula nayiphi na ingxaki ngamandla akhe onke, kwaye, ngenxa yoko, uhlala engasakwazi ukuqonda eyakhe imida.
Izinyo elilahlekileyo kwiphupha lakho linokukwenza kucace kuwe ukuba uvumele izinto zenzeke kwaye ungasoloko uziva uxanduva lwayo yonke into.
Rhoqo, i-canine iyaphuka ngexesha lokulala. Le meko yamaphupha ngokubanzi ibonisa ukungaphumeleli kwihlabathi elivukayo. Ukuba umphuphi ubona omnye umntu ophula i-canine, iphupha lilumkisa ngomhlobo ongathandekiyo. Ukuba ugqirha wamazinyo ukhathalele i-canine, iphupha kufuneka lilumkele izivumelwano zorhwebo.
Uphawu lwephupha «izinyo elaphukileyo» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga ukutolikwa kwengqondo yamaphupha, "iphukile izinyo" umfanekiso wephupha ungabonisa utshintsho olunzima rhoqo ukusuka kwisigaba sobomi ukuya kwesinye. Ukuphulukana namazinyo okanye amazinyo aqhekekileyo kuhlala kulingana Ukubola y ukuguga.
Ngokunokwenzeka amaphupha axakeke kakhulu ngesihloko sokuguga. Uyazibuza ukuba usenomdla na kwaye unqweneleka kwaye uziva ephantsi kakhulu kwindlela azijonga ngayo. Kuya kufuneka uye ezantsi kolu loyiko kwaye ucinge ngento enokukunceda uzive ulungile ngomzimba wakho namhlanje nakubudala obudala.
Ukuba awusakwazi ukutya ukutya ngenxa yokuphulukana namazinyo, kuya kufuneka uzibuze ukuba ulungile na kuwe ebomini kwaye ukuba uyazinyamekela. Kungenxa yokuba ukutya ukutya kukwathetha ukhathalelo kunye noqwalaselo ngokomfuziselo.
Iimeko zoxinzelelo ebomini okanye usizi zinokusithintela ekutyeni, kodwa ukuba izinyo liphuka ephupheni, kufuneka licace. isilumkiso Kuya kuba ngcono ukuba uzikhathalele kwaye uncede umzimba uphinde ufumane amandla obomi.
Njengakwezinye iindawo ezininzi, ukutolikwa kwephupha kunika kuphela umkhombandlela othile apho iphupha linokujolisa khona. Ukutolikwa ngokuchanekileyo kuhlala kuhlala kubangelwa yimeko nganye kunye nemeko yobomi bephupha. Ukuba ukhe wahlangabezana nezinye iisimboli zamaphupha ngelixa uleleyo ezazinxulumene nezinyo elaphukileyo, zikhangele usebenzisa indawo yokukhangela ngasekunene kweli phepha kwaye uphinde ujonge le mifanekiso ukubeka iphazili kunye.
Uphawu lwephupha «izinyo elaphukileyo» - ukutolika kokomoya
Ukuba izinyo laphukile, uphawu lwephupha lukwamele nokutolikwa ngokomoya. ilahleko.
Oku kunokuba yilahleko yokomoya kabani okanye kubonise ukuba kunzima ephupheni ukufumana ukufikelela okwaneleyo kuyo.